RW Rooble oo shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda ciidul Adxa - Bulsho News
RW Rooble oo shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda ciidul Adxa
Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa Shacabka Soomaaliyeed ugu Hambalyeeyay Munaasabadd Ciidul Adxa oo beri ku beegan.
“Dhamaan shacuubta Islaamka, gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed meelkasta oo aad joogtaan waxaan rabaa inaan halkan idinkaga hambalyeeyo ciida barakeysan ee ciidul Adxa, waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan”. Ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Rooble.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay gacan isa siiyaan oo ay u kaalmeeyaan dadkooda tabaaleysan.
“Shacabka Soomaaliyeed meelkasta oo aad joogtiin waxaan idinka codsanayaa inaad gacan isa siisaan, waxaad tihiin shacab wanaagsan kiina hantida leh waxaan rabaa in uu wax siiyo kiina aan waxba heysan, gaar ahaan agoonta, masaakiinta iyo dadka danyarta ah”. Ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Rooble oo hadalkiisa ku daray “Ciidan waxa ay ku soo aaday xilli dalka uu ku jiro doorasho, Insha Allah aniga iyo Xukuumadeyda waxaan rajeyneyna in doorashadan noogu qabsoonto si cadaalad ah, oo xaq ah oo hufnaan ah”.